Asa fampihorohoroana tany Bruxelles : olona 30 maty, 200 mahery naratra nipoahan’ny baomba | NewsMada
Asa fampihorohoroana tany Bruxelles : olona 30 maty, 200 mahery naratra nipoahan’ny baomba
Nitrangana asa fampihorohoroana mahery vaika tany Bruxelles Belzika, omaly maraina. Olona 30 ny maty, ary 200 mahery ny naratra mafy, hatramin’ny ora nanoratanay. Indroa miantoana ny fanapoahana baomba, tany amin’ny seranam-piaramanidina Zaventem Bruxelles ny voalohany, ary tany amin’ny Métro an’i Maelbeek, ny faharoa. Voalaza fa mbola nisy baomba fanintelony fa tsy nipoaka izany.
Ireo vondrona mpampihorohoro islamika no nahavanon-doza, ka nanao vivery ny ainy ireo roa lahy nahavanona izany. Efa nilaza ry zareo Daesh fa izy ireo no nahavanona ity zava-doza nitranga tany Bruxelles ity.
Fotoana nahabetsaka ny olona mifamezivezy mihitsy amin’ireo toerana roa ireo, tamin’ny fotoana nipoahan’ny baomba, tokony ho tamin’ny 8 ora maraina teo. Azo sarin’ny camera mpanara-maso tao amin’ny seranam-piaramanidina Zaventem sary ireo telo lahy voalaza fa tompon’antoka tamin’ity fanapoahana ity, minitra maromaro talohan’ny nitrangan’ny loza.
“Naheno fipoahana mahery vaika. Nahita ny olona nihazakazaka aho, raha mbola teo am-pilaharana tapakila. Taorian’izay, nisy nipoaka mafy be tsy lavitra ahy”, hoy ny fitantaran’ny nahita maso ity toe-javatra ity.
Nitombo tsikelikely ny olona maty taorian’ny fipoahana indroa nisesy. Nihetsika avy hatrany ny polisy sy ny mpamonjy voina ary ny manampahefana rehetra any Belzika raha vao nitranga ity loza tsy roa aman-tany ity.
Nanaitra izao tontolo izao
Nivory tao amin’ny tranoben’i Elysée avy hatrany ry zareo Frantsay, notarihin’ny filohany, François Hollande sy ny Praiministra Emmanuel Valls. Nilaza fa miombona tanteraka amin’ny mahazo an’i Belzika, ary mandray fepetra amin’ny fiarovana ity firenena ity sao misy ny mety mbola hitohizan’ny asa fampihorohoroana. Nohamafisina ny fiarovana any Frantsa. Toy izany koa ireo firenena eorôpeanina rehetra. Samy nitondra teny fampaherezana ho an-dry zareo Belza avokoa ny firenena rehetra.
Tohin’ny zava-nitranga tany Frantsa ny 13 novambra 2015 ihany ity raharaha ity. Ny Daesh hatrany no milaza ho tompon’antoka, ary nifandray rahateo tamin’ny fisamborana sy fahafatesan’ireo silamo mpirahalahy maromaro tamin’ity raharaha ity. Salah Abdeslam nytratra farany tamin’ny resaka fampihorohoroana tany Paris, ary efa nilaza mialoha izy ity fa hisy fanapoahana baomba any Bruxelles, ary izao nitranga izao tokoa.
Tsy mbola fantatra na misy teratany malagasy amin’ireo maty na naratra tany Belzika ity.